Liverpool oo Bahdishay Roma Kulankii Anfield…Xili Salah uu Xushmad u muujiyay kooxdisii hore+SAWIRRO – Gool FM
Liverpool oo Bahdishay Roma Kulankii Anfield…Xili Salah uu Xushmad u muujiyay kooxdisii hore+SAWIRRO
CR Shariif April 24, 2018
( Champ’ League ) 24 April 2018. Naadiga Liverpool ayaa ciida ku dartay dhigeeda Roma ciyaarta lugta koowaad ee afar dhamaadka Champions league kadib markii ay kaga adkaadeen 5-2.
Qeyta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-0 oo ay hogaanka ku haysay kooxda Liverpool oo dhan kastaa kaga wnaagsaneed dhigooda Roma.
Ka hor inta aysan bilaaban goolasha reds waxaa daqiiqadihii hore ee dheesha dhaawac looga saaray xiddiga Alex Oxlade-Chamberlain kadib markii uu isku day uu ku sameyay daafaca bixid ee Roma Aleksandar Kolarov, waxaana lagu badalay Georginio Wijnaldum.
Laacibka Sedo Mane ayaa fursadii ugu horeysay ka lumiyay kooxdiisa kadib kubad isaga iyo goolhayaha ah taasuu marsiiyay goolka korkiisa, waxaa sido kale jirtay in daqiiqad kadib uu cirka ku tolaw baas uu banaanka soo dhegay Roberto Firmino.
Laakiin daqiiqadii 36-aad waxaa yimid goolka ay Liverpool hogaanka ku qabatay kadib kubadd uu si qurax badan angalka goolka uu ka dhaliyay Mohamed Salah isagoona wax dabaaldaga muujin.
Daafac Dejan Lovren ayaa kubad ka timid koornaha birta ku dhiftay inta uusan Salah dhalin goolka labaad taasoo aheyd kubad weerar celisa waxuuna kubadd dhex ka bixis ah ka helay Firmino wiilka dalka maser kasoo jeeda ayaana qaab caqli ku dheehan banooniga kaga kor bootiyay goolhayaha Roma Alisson Becker.
Kooxda martida ayaa heshay hal fursad qeybta hora waxaana kubad birta Liverpool kaga dhiftay Aleksandar Kolarov xili ciyaarto 0-0 aheyd.
Dib markii la isugu soo laabtay Kaambiyaha dambe kooxda Liverpool ayaa sii laba jibaartay duulaankeeda goolka waxeyna la yimaadeen goolka seddaxaad ee ciyaarta taasuu shaqaba dhex dhigay Sedo Mane kadib baas uu soo dhigay Mohamed Salah.
Wax yar kadib Salah ayaa caawinadisii labaad ee ciyaarta samayeyay wuxuuna kubad u dhigay afka hore ee goolka cayaariyahan Firmino oo si sahlan ugu dhaliyay Reds goolkii 4-aad, isla Firmino ayaa goolka shanaad madax ku dhaliyay kadib koorne uu soo tuuray laacibka James Milner. Waxaan ay Liverpool ku qaadatay 3 gool ay qeybta dambe 13 daqiiqo iyadoo ay jiraan jaanisyo kale uu goolhayaha roma badbaadiyay.
Kooxda Roma ayaa dhamaadka dheesha la timid labo gool waxaana goolka hore u dhaliyay Edin Dzeko halka uu goolka labaad rigoore ku dhaliyay laacibka Diego Perotti.
Liverpool ayaa 3 gool faa’iido ah wadata taaso ka dhigeysa iney gaari karaan 70% boqolkiiba finalka Champions league iyagoo lugta labaad booqan doona garoona Olimpico ee Caasimada talyaaniga.
Maxey Tahay Rikoorada uu Salah ka Sameyay Kulankii Liverpool iyo Roma